Tijaabinta Kumbuyuutarrada Shakhsiyeed Qalabka Kumbuyuutarka Si Amaan ah: Tilmaamaha Ka Soo Baxda
Filecout waa faragal Trojan xaasidnimo, taas oo si dhab ah u waxyeeleyn kara software computer. Taasina waa sababta ka saarista deg degga ah ee khatarta ah in ay tahay xulashada ugu fiican ee user. Oliver King, oo ah khabiir ku takhasusay Semt Adeegga Dijital ah, wuxuu sharxayaa sida looga saaro Filecout Trojan computer ka ugu fiican ee suurtogalka ah - home security systems with video monitoring.
Trojan Filescout: Guudmarka
Xaqiiqooyinka khaaska ah ayaa si gaar ah u bartilmaameedsadaa goobaha kombiyuutarka. Marka qalabka loo yaqaan 'malware' uu bedelay nidaamka hawlgalka ee nidaamka hawlgalka, waa sahlan tahay in lagu sameeyo galmada. Taas ka dib, Trojan waxay soo rogtaa faylasha lagama maarmaanka u ah inay u rakibaan oo ay aasaasaan joogitaanka kombiyuutarka. Dabcan, waxay u socotaa fasax la'aan user. Marka qalabku uu ku jiro nidaamka, waxqabadka kombuyuutarku wuu hoos u dhacayaa taas oo, markaa, waxay saameysaa codsiyada kale. Xaaladaha ba'an, Trojan waxay joojin kartaa barnaamijyada, sidaas darteed, waxay saamayn ku yeelanaysaa awoodda lagu fulinayo hawlaha qaarkood. Iyadoo aan lahayn barnaamij codsi oo isdaba-joog ah si looga ilaaliyo galmada ama mid ka mid ah si loo ogeysiiyo waxqabadyo laga shakiyo, nacasku wuxuu ka heli karaa macluumaadka kombiyuutarka si sahlan.
Maxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Hoosho?
Filescout Trojan waa shaqo ka mid ah hackers xaasidnimo leh niyadda xun ee kombiyuutarka ay bartilmaameed. Waxaa loogu talagalay in ay ahaato mid aad u-dhib badan ujeedada gaarka ah. Mid ka mid ah lama ogaan karo isla markiiba, laakiin qaar ka mid ah calaamadaha ayaa shaki gelinaya, waana in ay u fiirsadaan iyaga. Tusaale ahaan, haddii kombuyuutarku uu bilawdo geeddi-socodkeedu wuu ka hooseeyaa sidii caadiga ahayd, tani waa sababta ay ugu filan tahay in lagu baaro..Haddii mid ka mid ah uu internetka ku dhexjirto, oo browserku wuxuu keenaa daaqadaha daaqadaha ee ka muuqda shaki, waa inuu sidoo kale qaataa wakhti si uu u kormeero kombuyuutarka si dhow. Ma aha in caqli gal ah in aad gujiso dariishadan daaqad-furan. Kiisaska intooda badan, waxay sababi karaan faylka Filescout Trojan ama feyl loo geliyey nacas kale. Riixidda xiriiriyeyaasha aan hubin inay halis tahay maadama cilmi-baaristu ay muujisay in khabiirada ay isticmaalaan sida kormeerka hawlaha internetka oo ay ururiyaan macluumaadka gaarka ah sida xogta dhaqaalaha iyo macluumaadka sirta.
Dhammaan sababaha kor ku xusan, waa lagama maarmaan in la baabi'iyo Trojan Horse isla marka uu ogaado. Ma aha oo kaliya mashiinka la ilaaliyo, sidaas darteed waa xogta ku jirta. Kuwa soo socda ayaa ah talaabo tallaabo tallaabo ah oo lagu xallinayo dhibaatadan.
Dib-u-saaridda Trojan ee Filescout
Habka Qalabka ah:
Ka hor inta kale, soo qaado nuqulka SpyHunter software online. Waa barnaamij waxtar leh, oo ay isticmaalaan dadka intooda badan si ay ula socdaan oo ay nadiifiyaan dhammaan hanjabaadaha iyo caabuqyada kombiyuutarka.
Ka dib markaad furto codsiga antivirus, dooran scan buuxa oo sug in ay falanqeeyaan dhammaan faylasha kombiyuutarka
Dhammaan hanjabaadaha iman kara waxay ku muujinayaan interface. Xulo oo dhan iyo ka saar.
Maamulaha hawlaha, dooro "dhammaan habka" tabka, iyo liistada dhammaan geeddi socodka socodka halkan ayuu ku tusayaa. Raadi faylka Filescout Trojan liiska ka dibna guji 'habka dhamaadka' ee dhinaca hoose ee daaqada.
Ka dibna u gudbi nidaamka laga bilaabo diiwaanka. Raadi faylka Filescout Trojan ee keydka diiwaanka "HKEY_LOCAL_MACHINE" oo tirtir.
Ugu dambeyntii, tag barnaamijka caadiga ah ee rakibaadda barnaamijka, fur furka Barnaamijka Faylka oo tirtir dhammaan faylasha hoosta magaca Trojan.
Si looga hortago kiisaska infakshanka Trojan mar labaad kombiyuutarkaaga, waa inuu ka fogaadaa websaydhada aan shaki ku jirin, barnaamijyada aan aqoon, iyo nadiifinta dhammaan emailada spam.